Kordhi fursadaada inaad hesho shaqo | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / In laga shaqeeyo Iswiidhan / Kordhi fursadaada inaad hesho shaqo
Adigu waxaad caawimaad ka heli kartaa adeega Hitta yrke haddii aanad hubin nooca xirfad ee kugu haboon ama waxa xirfadaada micnaheedu ka yahay gudaha Iswiidhan.
Dhegayso Xafiiska Shaqada idaacadeeda intarnatka ee Ny i Sverige
Xafiiska Shaqada waxay bilowday idaacad intarnatka ah oo ku baxda dhowr luuqadood taas oo magaceedu yahay Ny i Sverige. In la dhageysto idaacadan waxay la mid tahay qiyaastii in la dhageysto barnaamij idaacad laakiin waxaad ka dhageysanaysaa dhanka kombiyuutar, shaashad yar ama telafoonka moobilka. Dhageyso idaacada Ny i Sverige oo hel talooyinka ku saabsan sida ay tahay in looga shaqeeyo waxna looga barto gudaha Iswiidhan, sida aad u qorayso codsi shaqo oo fiican iyo sida aad isagu diyaarinayso wareysiga shaqo.
Xafiiska Shaqada boggeeda intarnatka waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan idaacada Ny i Sverige.